U Thein Sein government and Min Aung Hlaing would be held responsible for allowing this kind of inciters to kill Muslims | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Terrorist leaders’ meeting
I give up all hope for future of Myanmar after reading this Racist bias post ofahighly educated Bama specialist doctor »
U Thein Sein government and Min Aung Hlaing would be held responsible for allowing this kind of inciters to kill Muslims.
But the problem is…if gov forces Police etc FIRST confiscated the defensive weapons from Muslims and ALLOW the Buddhists to assault later…as happened in many places….
Angle Black Angle added 10 new photos.
LU Myanmar’s status.မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးသတိရှိပါ အသက့် အနေအထားရှိပါ မန္တလေးမှာ လက်နက်မိတာ ၅နေရာရှိပါပြီ လမ်းတလျှောက်ဖုန်းတွေလည်းဝင်နေပါပြီ ကျွန်တော်တို့ လည်းနားစွင့် နေပါတယ် ____________________________________________အင်ဒိုနီးရှားဂျီဟတ် ဆိုတာနာမည်ကြီးပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးသိပါတယ် ဗလီတွေကနေ အချက်ပြတာနဲ့ အင်ဒိုတစ်နိုင်ငံလုံးက ဘာသာခြားတွေကိုသတ်လိုက်ကြတာဘာပြောကောင်းမလဲ ကလေးငယ်လေးတွေ ခေါင်းတွေဖြတ် ချိတ်ထားတာ မြင်မကောင်းဘူး အားလုံးသတိရှိကြပါ ဂျီဟတ်နိမိတ်ရှေ့ပြေး လာပြီ မြန်မာတွေထဲဘယ်သူ လက်ရဲသလဲ သူတို့ က တုတ်ဓား တွေနဲ့ ထွက်လာချိန်ခုခံဖို့ တစ်နိုင်ငံလုံးက မျိုးချစ်အားလုံးကို နှိုးဆော်ပါသည်
ရန်ပွဲတွေရပ် အားလုံး စုစည်းပါ ကျွန်တော်တို့ထွက်ချဖို့ လိုပြီထင်တယ် မြို့ တိုင်းအမာခံတွေ စုထားပါ စစ်တပ်တွေက မြို့ပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး ကလေးငယ် အဖိုးအဖွား မိန်းကလေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အသင့် ပြင်ပါ အချိန်နည်းနေပြီ ကိုယ့် မြို့ကိုကာကွယ်ပါ ဂျီဟတ်မှာ NLD မရှိဘူး ဒီမို သူငယ်ချင်းတိုင်းရင်းသားများ သတိထားပါ သူတို့ မှာ NLD မရှိဘူး ကာဖီဆိုတာနဲ့ ညီအစ်ကိုတို့ ဘေးက ကုလားကခေါင်းထဖြတ်မှာပဲ ယုံတာမယုံတာထက် သတိထားပါခင်ဗျာ တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ ခေါင်းအေးအေးထား နောက်ဆုံးအချိန်တောင် မြန်မာ့ သတ္တိကို ပြကြကုန်လော့ _________သတိအမြဲကပ်ထားပါ မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါချက်ချင်း တုန့်ပြန်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါ ._______________________.မျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေး
မန္တလေးမှာ မွတ်ကုလားတွေ ဗလီတွေနဲ့အိမ်တွေ ဆိုင်တွေ ကပါ လက်နက်တွေ မိ့နေပြီ ။
Ko Gi ရဲ့ wall ပေါ်က ရသမျှဆွဲလာတဲ့ ပုံတွေပါ။
ငြိမ်းချမ်းသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဟေ့
This entry was posted on March 7, 2014 at 4:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.